Itheyibhile yeentloko kunye nokuHamba kwi-Excel esebenzayo kunye neMicrostation-iGeofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Isatifiketi seZikhokelo kunye neMida kwi-Excel exhumana ne-Microstation
Isatifiketi seZikhokelo kunye neMida kwi-Excel exhumana ne-Microstation
Siqalise iintsuku ezimbalwa ezedlule sithetha malunga nendlela yokwenza oku, kodwa ukwenza i-concatenation Excel kwi-AutoCAD okanye kwi CSV kwi Microstation; zombini iibheringi kunye nolungelelwaniso. Emva koko kukho ukungabaza Ukuba bekungakho isicelo esingafunanga unamathisele ikopi, kodwa endaweni yoko sinxibelelana nokuwa kwe-Excel kwaye endaweni yokufumana amanqaku, emva kokukhangela ndidiniwe, kwaye ngokuqinisekileyo zininzi i-mdl ze Microstation kunye neLisp ye AutoCAD ... ngelishwa andifumananga okuninzi … Iyakusebenza
Inye kuphela ndiyifumanayo isicelo esenziwe kwi-Visual Basic ye-Moicrostation V8 ebizwa ngokuba yi-Visual Basic Rumbosdisttoexcel.mvba, unokuyikhuphela kwifom yefayili ukusuka apha.
1. Indlela yokuyilayisha
Emva kokuyilanda kufuneka uyivule
Ukuyilayisha, yenza oku kulandelayo: izixhobo / i-macro / umphathi weprojekthi / umthwalo weprojekthi / jonga usetyenziso apho ugcine khona / emva koko ukhethe ok
2. Indlela yokwenza ngayo
Nje ukuba uyilayishile, uyikhethe kuMphathi weProjekthi kwaye usebenzise iqhosha elitolo oluluhlaza "macros"
Emva koko ukhethe isicelo "RunApplication.runMainMenu"
Usebenzisa iqhosha elithi "run".
kwaye iphaneli efana nale iya kuvela
3. Yintoni esiyenzayo kwisicelo
Le sicelo inemisebenzi emibini, zombini isebenza ne-Microstation Geographics.
Thumela kwi-Excel, ngenxa yoko, yenza ucingo olufaka ipoloni, uze ukhethe okukhethwa kukho ngaphandle
Oku kuvelisa iFayile kwi-Excel, apho iibhodi, ukuhamba kunye ne-UTM idibeneyo iyahlukana.
Ngexesha elifanayo libeka iifaki kwiipoloni ngokuqala kunye neyona ephezulu kumzantsi-ntshona.
Kwakhona kukuvumela ukuba wenze okuphambeneyo, ukusuka kwi-data kwi-Excel unokwakhiwa kwakhona kwipolygoni.
Le vidiyo Ibonisa indlela isebenza ngayo.
Ukuba umntu ufuna ukuyizama, yikhuphele phantsi kwaye undazise ukuba ikunikeza iingxaki ... kubi kakhulu i-VBA inegama eligqithisiweyo, ukuba kukho umntu onesibindi sokuyiphula ... kunokwenzeka ukuyinika amandla amakhulu.
Ndiyaqonda ukuba kufanele isebenze ngeMicrostation eqhelekileyo, nangona ifuna iMicrostation Geographics ngeprojekthi evulekileyo, nayiphi na. Ayifanelanga kwaye nesihleli seMboniso esisiseko seMicrostation kufanelekile ukuba ususe elo candelo ... kunjalo, kuba kufuneka uphule igama eligqithisiweyo.
Zama kwaye undixelele
Omnye kufuneka aqonde indlela yokuphosa iphasiwedi, kuba isicelo sitshisa kakhulu
Ukuba umntu uyazi malunga nesicelo, siya kuvunywa
Ngaba omnye umntu ungandixelela ukuba balayishe i-macro? okanye ndingayifumana phi? bulela kakhulu
Erick Lopez uthi:
Sawubona! Ikhasi elihle kakhulu. ngcebiso kubo bonke. Ngaba kukho nabani na ukuba babe nale sicelo? Inyaniso kukuba uthi unokukhuphela ukusuka apha kodwa kubonakala ukuba ikhonkco ayisebenzi. Ndiyathemba ukuba unokunceda ngale nto.
imibuliso evela kwi-chile
Ndivile ukuba inika iingxaki nge-Microstation XM, andizange ndivavanye ngeV8i kodwa kufuneka ihambe kakuhle.
Ukubulisa kunye novuyo kwiphepha.
Ndilikhoboka ... kwiphepha.
Ngaba isebenza ne-Microstation v8i?
Ngaba sele usebenzisa i-XM?
Kuza kufuneka kubuyiselwe kwakhona, isiqingatha esinzima.
Molo G! njengoko esi sixhobo sibalasele ndisisebenzisa kakhulu… kodwa ayisasebenzi neMicrostation V8i XM… ndingafumana uhlaziyo?